डाउनलोड गर्नुहोस् Advanced SystemCare को लागी Windows
सित्तैमा डाउनलोड गर्नुहोस् को लागी Windows (48.00 MB)
डाउनलोड गर्नुहोस् Advanced SystemCare,
उन्नत सिस्टमकेयर डाउनलोड गरेर, तपाईंसँग प्रणाली अप्टिमाइजेसन प्रोग्राम हुनेछ जुन कम्प्यूटर मर्मत सम्भार र कम्प्युटर एक्सेलेरेसनको सबैभन्दा सफल प्रोग्रामहरू मध्ये एक हो।
कसरी उन्नत प्रणालीकेयर स्थापना गर्ने?
उन्नत सिस्टमकेयर, जुन सफ्टवेयर हो जुन तपाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईको कम्प्युटरमा नि: शुल्क प्रयोग गर्न सुरु गर्न सक्नुहुनेछ, प्रणाली अप्टिमाइजेसन उपकरण हो जुनसँग धेरै फरक-फरक उपयोगी उपकरणहरू छन् जुन तपाईले आफ्नो कम्प्युटरलाई पुनर्जीवित गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, जुन समयको साथ बिस्तारै काम गर्न सुरु भएको छ। केहि समयको लागि प्रयोग गरेर र यसलाई पहिलो दिनको स्थितिमा फिर्ता गर्नुहोस्। उन्नत सिस्टमकेयरले तपाईलाई जटिल मर्मत र केही क्लिकहरूको साथ अप्टिमाइजेसन कार्यहरू गर्न सक्षम गर्दछ।
उन्नत सिस्टमकेयरमा मर्मत र अप्टिमाइजेसन उपकरणहरू मध्ये ती उपकरणहरू हुन् जसले रेजिस्ट्री त्रुटिहरू ठीक गर्न र रद्दी फाईलहरू सफा गर्न मद्दत गर्छन्। त्यस्ता त्रुटिहरू र अनावश्यक फाईलहरूले तपाईंको अपरेटि system प्रणाली खोल्न र ढिलाइ बन्द गर्न, र तपाईंको कम्प्युटरलाई आदेशहरूमा ढिलाइ प्रतिक्रिया गर्दछ। उन्नत सिस्टमकेयरको साथ, तपाईं डिस्क डिफ्रेगमेन्टेशन र रेजिस्ट्री डीफ्रेग्मेन्टेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यस तरिकाले, तपाइँको डिस्क प्रदर्शन पनि बढ्छ।
कसरी उन्नत सिस्टमकेयरको साथ कम्प्युटरको गति बढाउने?
उन्नत सिस्टमकेयरले प्रयोगकर्ताहरूलाई विन्डोज स्टार्टअपको गति र विन्डोज अपरेशन द्रुतगति बाहेक सुरक्षा उपायहरू लिनको लागि अवसर दिन्छ। उन्नत सिस्टमकेयरमा ब्राउजर सुरक्षा उपकरणहरूले ब्राउजर प्लग-इनहरू हटाउन र गृहपृष्ठ परिवर्तनहरू रोक्नको लागि समाधान प्रदान गर्दछ। यदि तपाईंको ईन्टरनेट ब्राउजरलाई नचाहिने तेस्रो पार्टी सफ्टवेयर र एड्-अनहरू द्वारा लिइएको छ भने, तपाईं यि उपकरणहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र गृहपृष्ठ प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। उन्नत सिस्टमकेयरले तपाइँको ब्राउजरहरूको निरन्तर अनुगमन गर्दछ र तपाइँको गृहपृष्ठ र पूर्वनिर्धारित खोज इञ्जिनको अनधिकृत संशोधनलाई रोक्दछ।
उन्नत सिस्टमकेयरको साथ, तपाईं स्वचालित रूपमा तपाईंको ईन्टरनेट ब्राउजि ofको ट्रेसहरू हटाउन सक्नुहुनेछ। तपाईंं इन्टरनेट ब्राउजर बन्द छ जब स्वचालित रूपमा गोपनीयता ट्रेस मेटाउन कार्यक्रम कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ।
उन्नत सिस्टमकेयरमा एक टुलकिट सेक्सन पनि समावेश छ जुन IObit द्वारा विकसित गरिएको अन्य उपयोगी उपकरणहरूको पहुँच गर्न सजिलो बनाउँदछ। उन्नत सिस्टमकेयरमा टर्बो पावर सेक्सनले तपाईंलाई खेलहरू वा अनुप्रयोगहरूमा तपाईंको आवश्यकता अनुसार तपाईंको कम्प्युटरको प्रदर्शन बढाउन अनुमति दिन्छ। यस उपकरणले प्रणाली सेवाहरू र विन्डोजमा तेस्रो पार्टी सेवाहरूको जाँच गर्दछ, महत्वहीन व्यक्तिको अन्त्य गर्दछ र अनुप्रयोगहरू वा खेलहरूलाई काम गर्दछ तपाईंले बढी संसाधनहरू दिन्छ। यसैले, यी खेलहरू र अनुप्रयोगहरू अधिक आरामसँग काम गर्दछन् र प्रदर्शन ड्रपहरू रोकिन्छन्।
उन्नत सिस्टमकेयर १ with को साथ नयाँ के छ
ईमेल सुरक्षा (नयाँ): जीमेल, आउटलुक र याहू मेल को लागी तपाइँको ईमेल मा ईररनेट एक्सप्लोरर, फायरफक्स, क्रोम र एज मा दुर्व्यवहार लिंक र वेबसाइटहरु ब्लक।
स्टार्टअप अप्टिमाइजेसन: (सुधारिएको) नयाँ डाटाबेसको साथ स्टार्टअपमा अधिक आईटमहरू असक्षम गर्नुहोस्।
सफ्टवेयर अपडेटर (विस्तारित): percent० प्रतिशत अधिक नयाँ प्रोग्रामहरूले सजीलो अपडेट गर्न समर्थन गर्दछ।
ब्लक असुरक्षित प्रोग्रामहरू (विस्तारित): कम्पनी नामबाट कार्यक्रमहरू ब्लक गर्न समर्थन
टर्की भाषा समर्थन।
स्टाइलिश र उपयोगी इन्टरफेस।
यो प्रणाली अनुकूलन को लागी शक्तिशाली उपकरण प्रदान गर्दछ।
फाईल आकार: 48.00 MB
डाउनलोड गर्नुहोस्: 8,913